Isinciphisi sejubane imvamisa iyisiqeshana semishini elula. Lesi isitimela segiya nje phakathi kwemoto nemishini esivame ukusetshenziselwa ukunciphisa ijubane amandla adluliselwa ngawo. Isinciphisi sejubane, esaziwa nangokuthi igear reducer, iyigajethi yemishini esetshenziselwe izinhloso ezimbili ngokuvamile.
Ukusetshenziswa okubalulekile kwalolu cingo olwenziwe ngomshini ukuphinda kabili isilinganiso se-torque ekhiqizwa ngumthombo wamandla wolwazi wokwandisa isilinganiso somsebenzi ongasebenziseka. Kuhle ukuthola ifayela le- umkhiqizi onguchwepheshe wamagiya namabhokisi wamagiya kanye nezinciphisi zejubane ukuthola umkhiqizo osezingeni eliphakeme. Ngezansi, ngizokwabelana ngezinto ezithile ezibalulekile mayelana nezinciphisi zejubane okufanele wazi.
1. Izicelo ze-Speed ​​Reducers
Izinciphisi zejubane zivamise ukusetshenziselwa ukusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zemishini yezimboni neyasekhaya edinga ukwehlisa ijubane lemoto kagesi kahle nangokuphepha. Kuyasiza ukulungisa ijubane lemoto ekuhlinzekeni i-torque edingwa ngumshini ukuze isebenze kahle.
Kusukela ngohlelo lokudlulisa, zigqama ngenxa yobunzima bazo, ezinhlobonhlobo zezinhlelo zokunciphisa isivinini ezitholakalayo ngokuya ngemfuneko kanye nemininingwane yohlelo lokusebenza.
2. Izinto Eziqamba Isinciphisi Esisheshayo
Kunezinto ezithile ezibhala izinciphisi zejubane, kufaka phakathi:
Lokhu kungamandla okujikeleza akhonjiswa kumayunithi amakhilogremu ngemitha, Newton ngemitha, noma ngamakhilogremu ngezinyawo. Lapho i-torque ihlanganiswa nesikhathi sokwenza, ngaso leso sikhathi iphenduka amandla.
Imoto kagesi iza namandla athile acacisiwe ku-HP. Inesivinini sokusebenza se-shaft yokukhipha. Zombili izici zemoto kagesi, amandla, nejubane, zichaza i-torque engayinikeza. Futhi ithoque lisiza ekunqumeni ukuthi umthwalo uzophenduka noma cha.
Kuyindlela yokudlulisa futhi yakhiwe ngeqoqo lezinto ezenziwa ngomshini ezihlinzeka ngokuncishiswa kwesivinini esifanele futhi zandisa nokudluliswa kwe-torque. Zonke izinto zalesi sakhi zibalulekile. Kudinga i-geometry ephelele nokwakheka kokusebenza okufanele kohlelo.
3. Isinciphisi Esinciphisa Ijubane
Ngaphambi kokungena emininingwaneni yedizayini yezinciphisi zejubane, kufanele wazi ngezici zensizakalo ezibhekisa esimweni esithinta kakhulu noma esandisa izidingo zamandla ka-gearbox. Kungahle kuhlobene nothuli nomswakama ohlobene, inani lokudlidliza okumelana nalo, noma inani lemijikelezo yokusebenza. Ukwehlisa umthelela wento yesevisi kungumphumela wokuba nolwazi olujulile ngokusebenza kwangaphakathi kwesinciphisi kanye nokwenza ngcono ukwakhiwa kwayo yonke indlela yokudlulisa.
Lezi ngezinye zezinto ezibalulekile odinga ukuzazi mayelana nezinciphisi zejubane. Ungathola omunye wabakhiqizi abahamba phambili bokunciphisa isivinini, isibungu gear gear, ama-helical gear, amagiya kagandaganda, amabhokisi wamagiya ezolimo, nabanye abaningi ukuthenga imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani aphansi.